निराशातर्फ उन्मुख भएको बजेटमा के टिप्पणी गर्ने ? - Jhilko
निराशातर्फ उन्मुख भएको बजेटमा के टिप्पणी गर्ने ?
काठमाडौँ, १८ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संघीयतालाई कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमाथि संसदमा चलिरहेको छलफमा सहभागी हुँदै महतोले परम्परागत बजेट भएको र राज्यको चरित्रअनुसारको बजेट भएको टिप्पणि गरे ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महतोले भने, 'यो बजेट त राज्यधारी जो छन् उनीहरूको पक्षपोषण गर्न ल्याइएको बजेट हो । राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूलाई सिमान्तिकृत गर्ने कमजोर गर्ने प्रकारको बजेट आएको छ ।'
राज्यको चरित्र धनीलाई धनी बनाउने, शक्तिमा रहेकाको महिमागान गर्ने र कमजोर वर्ग तथा समूदायलाई झन कमजोर र कुनामा पार्ने रहेको भन्दै बजेट पनि सोहीअनुसारको आएको महतोको प्रतिक्रिया थियो ।
'मलाई लाग्दैन आम नेपाली जनता यो बजेट आउँदा उत्साहित हुने अवस्था छ,' महतोले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको तेस्रो बजेट हो । जस्तो पहिले आएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हो । थप निराशातर्फ उन्मुख भएको बजेटमा के टिप्पणी गर्ने ?'
बजेटले सरकार र सत्ताधारीहरू जनताप्रति वफादार छैनन् भन्ने देखाएको महतोको भनाई थियो। नागरिक भोकले मरिरहेको अवस्थामा सरकार भने कसैलाई भोकले मर्न दिँदैन भन्ने भाषणमा रमाएको उनको भनाइ थियो । 'जनता त दिनदहाडै मरिरहेको छ । यहाँ भाषण गरिरहेको छ( मर्न दिँदैन, भनेर ।'
सरकारले बजेटमार्फत पनि संघीयतालाई कमजोर पार्ने काम गरेको महतोको भनाइ थियो । उनले भने, 'संघीयतालाई सखाप पार्ने काम गरिरहेको छ सरकारले । सारा बजेट केन्द्रमा राखेर संघीयता बलियो हुन्छ रु ८९ प्रतिशत केन्द्रमा, ४ प्रतिशत प्रदेश र ७ प्रतिशत स्थानीय तहमा राखेर संघीयता बलियो हुन्छ ?/
नयाँ नक्सा अनुसारको निसान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संसोधन विधेयक पेस
गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नयाँ शासकीय मोडल भएकाले परम्परागत विधिको साङ्लोमा बाँधिन...
रवि लामिछानेलाई पुनः पाँच दिनको म्याद थप
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित...
विसं २०७२ वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर...
प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल जानुअघि भिडियो सन्देशसमेत...
फिचिसियन कोन्लेले राष्ट्रपति ट्रम्पको नमूना लिन एक मिनेट लागेको र १५ मिनेटभित्रै...